Puntland oo xukun dil ah ku riday 8 xubnood oo katirsan ururka Alshabaab - Somali Link Newspaper
Arbaco, Luulyo, 7, 2021 (HOL) – Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntey 8 dhalinyaro ah oo la sheegay in ay ahaayeen shabakad katirsan Alshabaab oo dilalka madax jabinta iyo qaraxyada ka geysan jirey magaalada Galkacyo gaar ahaan dhinaca Galmudug.
Maxkamadda ayaa muddo 30 cishe ah oo racfaan ah siisay xukumanayaasha, si ay u qabsadaan qareenno u dooda oo ka difaaca dambiyada ay ku mutaysteen xukunka dilka ah.
Maxkamada ciidamada Puntland, ayaa soo bandhigtay caddeymo maqal iyo muuqaal oo ay eedeesanayaashu ku qiranayeen in ay ka dambeeyaan dilal madax jebis ah iyo qaraxyo intooda badan ka dhacay Gaalkacyo dhinaceeda koonfureed ee Galmudug.
Waa markii labaad oo ay Puntland xukun dil ah ku rido xubno katirsan Alshabaab, muddo todobaadyo gudihiis ah. 18 kamid ah xukumanayaashaas ayaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa.
Previous articleWasiir Jamaal : Madaxweyne Deni waa musharrax madaxweyne, faraha hakala baxo arrimo doorashada
Next articleFrom child refugee to politician: Finland’s first Somali-born MP